केपी ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड-बाबुराम बालकोटमै किन गए ? - Enepalese.com
केपी ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड-बाबुराम बालकोटमै किन गए ?
इनेप्लिज २०७२ जेठ १५ गते १५:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १५ जेठ । नेकपा (एमाले) र एकीकृत (माओवादी)का शीर्ष नेताबीच शुक्रबार अपरान्ह बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा भेटवार्ता भएको छ । एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता डा बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भेटवार्तामा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सरकारको चर्चा चलिरहेका बेला माओवादी र एमालेबीच सरकारकै विषयमा वार्ता भएको हो । अपरान्ह ४ः३० बजेदेखि करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको एमाले अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिव रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । दुइ दलका नेताबीच भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको राहत, पुनःनिर्माण र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने तथा समसामयिक राजनीतिका बारेमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।